Barco နဲ့ပိုကောင်းတယ် - E2 တင်ပြတဲ့စနစ်လိုပဲ NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » အကြောင်းအရာဖန်ဆင်းခြင်း » ဒါဟာ Barco နှင့်အတူ သာ. ကောင်း၏င် - ထို E2 တင်ပြစနစ်လိုပဲ
သငျသညျအဆုံးစွန်တင်ဆက်မှုထိန်းချုပ်မှုလိုအပ်ပါတယ်သည့်အခါမျှထပ်မံ Barco နှင့်၎င်း၏ E2 တင်ပြစနစ်ထက်ကြည့်ရှုပါ။ အဆိုပါအရွယ်မှာနှင့် modular system ကိုဗိသုကာတိုးတက်သောသတင်းရပ်ကွက်အဘို့အ 12-frame ကိုအပြောင်းအလဲနဲ့အောင်းနေချိန်နှင့်အတူ 36-bits / အရောင် (1-bits / pixel) ကယ်တင်တတ်၏။ အဆိုပါ E2 ပြည့်စုံတင်ဆက်မှုထိန်းချုပ်မှုလိုအပ် features တွေနဲ့ functions နှင့်အတူ Loading ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း၏ 6G SDI input ကိုကဒ် 4G SDI ကိုထောက်ပံ့သော 6x BNC connectors ရှိပါတယ် - High-bandwidth ကိုလေ့ကျင့်မှုလုပ်တာလဲအဘို့အပြီးပြည့်စုံသော။ ထုံးစံ user interface ကို programming ကိုခွင့်ပြုဘို့ပင်၎င်း၏ API - အဆိုပါဖြစ်ရပ်ကိုမာစတာဆော့ဝဲ GUI ကို-based ရိုးရှင်းတဲ့ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံနှင့်ထိန်းချုပ်မှု application များအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။
ဇာတိ 4K input ကိုနှင့် output ကိုထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်အထူးသဖြင့်တိုက်ရိုက်ဖြစ်ရပ်စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်ဒီဇိုင်း, အ Barco E2 တင်ပြစနစ် ruggedly လမ်းအပေါ်တစ်ဦးအသက်အဘို့တစ်သံမဏိကိုယ်ထည်နှင့်အတူဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ကလွယ်ကူတင်ပို့ရန်နှင့်တပ်ဆင်ရန်အောင်သာလေးထိန်သိမ်းယူနစ်၎င်း၏ကျစ်လစ်သိပ်သည်းပုံစံအချက်နှင့်အတူ၎င်း၏ modular ကတ်များနှင့် dual-မလိုအပ်တဲ့ပါဝါထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများ, အတူ၎င်း၏ modular ဒီဇိုင်းကိုအသုံးပြုသူများကရိုးရိုးအနာဂတ် features တွေအသစ်တစ်ခု input ကိုသို့မဟုတ် output ကိုကဒ်ကိုထည့်သွင်းဖို့စွမ်းရည်ခွင့်ပြုပါတယ်။ အစဉ်အဆက်လယ်ပြင်၌ရှိသောအစိတ်အပိုင်းများကိုပြောင်းကြိုးစားခဲ့? E2 ရဲ့ modular, လွယ်ကူသောန်ဆောင်မှုများသေချာလျှင်အသုံးပြုသူများသည်လျင်မြန်စွာတစ်ခုလုံးကို box ကိုတင်ပို့သို့မဟုတ်အစားထိုးစရာမလိုဘဲ, ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု၏ဖြစ်ရပ်အတွက်တိကျတဲ့ input ကိုသို့မဟုတ် output ကိုကဒ်ဖလှယ်နိုင်သောကြောင့်ရှားပါးအခြေအနေကြောင့်ရန်လိုအပ်သည်အခါ။
မည်သို့ပင်သင်ဤသည့် HDCP-compliant system ကိုကအားလုံးစီမံခန့်ခွဲခြင်း, E2 ရဲ့ဇာတိသို့မဟုတ်ခဲ့သည်ဆို၏သွင်းအားစုနှစ်ခု connectors သို့မဟုတ်လေးခုအသုံးပြုနေသည်ရှိမရှိများ - 28 သွင်းအားစုများနှင့် 14 ရလဒ် (နှစ်ခု Multi-ကြည့်ရှုသူများနှင့်လေး aux လက်ငင်းခဲ့သည်ဆို၏ရှစ် PGM,) ကို E2 ပေးသည် ရှစ်လွတ်လပ်သော PIP ရောနှောနှင့်တစ်ဦးဆက်ကပ်အပ်နှံမြင်ကွင်းစုံအပါအဝင် system ကိုအပြည့်အဝပြသထိန်းချုပ်မှုကယ်လွှတ်ခြင်းငှါပါဝါ။ သောကြောင့်ယင်း၏ linkable ကိုယ်ထည်ဒီဇိုင်း, E2 လွယ်ကူစွာသည်ဤရှစ်လက်ငင်းထက်ကျော်လွန်ချဲ့ထွင်နိုင် - အချက်ပြမှုများကိုဖြန့်ဝေဖို့နောက်ထပ်ပြင်ပအပြောင်းအလဲနဲ့နှင့် routing ကိုထည့်သွင်းဖို့မလိုဘဲ! ကြောင်းလုံလောက်စွာမကြီးဘူးဆိုရင်၎င်း၏သွင်းအားစုများနှင့်အလွှာလည်းလုပ်မယ်လို့-up, 32 4K projector ကိုမှတက်ရောနှောနေခြင်းမှ၎င်း၏စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်, တိုးချဲ့နိုင်ပါသည်!
ဒါဟာကမ္ဘာ့ဖြစ်ရပ်များ၏ 90% တစ်ခုတည်း E2 processor နဲ့ထိန်းချုပ်နိုင်နားလည်သဘောပေါက်ဖို့အံ့ဖှယျပဲ! E2 ရဲ့တိုးချဲ့လင့်များသုံးပြီးနှင့်ပိုကြီးတဲ့စနစ်ကဖွဲ့စည်းသည့်ပရိုဆက်ဆာအတူတူချိတ်ဆက်သောအခါ, အခြား 10% စီမံခန့်ခွဲနိုင်ပါတယ်!
အဆိုပါ E2 အကြောင်းကိုအကြီးမြတ်ဆုံး features တွေတစ်ခုမှာကြောင့်အနာဂတ်-သက်သေပြမယ့်ဖြစ်ပါတယ်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် modular I / O ကဒ်များ, features အသစ်နှင့်အတူသစ်ကို signal ကို interfaces နှင့် / သို့မဟုတ်ကတ်များပေါ်လာသကဲ့သို့, E2 ပြီးရှိကြတယ်! သငျသညျထိုကဲ့သို့သောဒဏ်ငွေပြပွဲစီမံခန့်ခွဲမှု controller ကိုတစ်ခုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်လာတဲ့အခါ, သင်သည်သင်၏ဝယ်ယူသက်တမ်းကြာအတူသင်တို့သည်မည်ကိုသိလို အသုံးပြုပါ။ ထိုလျှို့ဝှက်ချက်နှင့်အနာဂတ်-သက်သေ၏တနျခိုးနှစ်ဦးစလုံးဖြစ်ပါတယ်။ E2 ရဲ့ချဲ့ထွင်မှုနဲ့အတူဒွန်တွဲ, ဒီလာရန်နှစ်ပေါင်းအဘို့သင့်စီမံခန့်ခွဲမှုလိုအပ်ချက်အားလုံးကိုကိုင်တွယ်လိမ့်မည်ဟုတဲ့စနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ငါဖြစ်ရပ်မာစတာ software ကိုဖော်ပြထားခြင်းခဲ့သလား GUI ကိုအသုံးပြုရလွယ်ကူဒါဟာင်အသုံးပြုသူများကိုလွယ်ကူစွာတစ်ဦး Ethernet ချိတ်ဆက်မှုမှတဆင့် (ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ Cross-platform ဒီဇိုင်း၏) တစ်ဦးကို PC သို့မဟုတ် Mac ဖြစ်စေထံမှ E2 ၏ setting များကို program များနှင့်ပြောင်းလဲပစ်ရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။ Configuring, programming ကို, စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်လုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့် setting ကို-တက်မြင်ကွင်းစုံ, program ကိုသူ့ဟာသူပေးခြေလှမ်း-by-step ချဉ်းကပ်ဖို့ကျေးဇူးတင်စကားရိုးရှင်းပါသည်။ တကယ်တော့ခုနှစ်, E2 သင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့မစိုက်ဖန်တီးမှုတောင်းဆိုချက်များကိုတည်းဟူသောရလဒ်တွေဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်စွယ်စုံပါ!
ထို့အပြင် 4p အပြည့်အဝသလောက်အသေးစိတ်အဖြစ်လေးကြိမ်ပေးနေချိန်မှာ Barco, မသာပုံရိပ်အရည်အသွေးမြင့်မားတဲ့ I / O သိပ်သည်းဆတိုးချဲ့ရန်နှင့်ကြာရှည်ခံမှုအတွက်ထူးကဲသောတစ်ဦး groundbreaking 1080K မျက်နှာပြင်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အအင်ဂျင်နီယာထားပါတယ် HD နှင့်ပိုမို texture နှင့်ပြတ်သားပုံရိပ်ပေးခြင်း။ ငှားရမ်းခြင်းနှင့်စင်မြင့်, Tours, ထုတ်လွှင့်စတူဒီယို, ခြင်း simulation နှင့် High-end ကော်ပိုရိတ်ကွင်း: ဒီယူနစ်ကအောက်ပါ application များအတွက်လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း၏ရိုးရှင်းတဲ့ဒီဇိုင်းပွိုစွမ်းဆောင်ရည်ကိုထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်တစ်ဦးအပျြောအပါးပါပဲ။
တစ်မ့်မှုတွေကြုံတွေ့ရအတွက် Key ကိုအင်္ဂါရပ်များ:
28 ထည့်သွင်းမှုများ, 14 ရလဒ်မျာ
လေး aux လက်ငင်းခဲ့သည်ဆို၏
တစ်ခုချင်းစီကို I / O ကဒ် 4K ထောက်ခံပါသည်
ရှစ်လွတ်လပ်သော PIP ရောနှော
သည့် HDCP 1.4 လိုက်နာ
EDID 1.3 လိုက်နာ
ဦးတည်ရာကိုတစ်ဦးလျှင်ဇာတိ resolution ကိုနောက်ခံရောနှောနထေိုငျ
ပေါင်းစည်း link ကိုကတ်များမှတဆင့်ချဲ့ထွင်မှု
Easy-To-အသုံးပြုမှုကို GUI ကိုထိန်းချုပ်မှု
မြင်ကွင်းကျယ်ဖန်သားပြင် blending ထောက်ခံမှု
ချောမွေ့စွာ aux switching
အဆိုပါ E2 အတူလုပ်ကိုင်ပြီးနောက်သင်အစဉ်အဆက်ကမပါဘဲလျှောက်ရှိတယ်ဘယ်လိုတွေးမိပါလိမ့်မယ်! ၎င်း၏ဘက်စုံနီးပါးအတိုင်းအတာထက်ကျော်လွန်ကြောင်း, လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရာနှင့်အတူငြိမ်ဝပ်စကားအသငျသညျစွန့်ခွာမည်ဖြစ်သည်။ ဒီအံ့သြစရာအတူလုပ်ကိုင်ပြီးနောက်, သငျသညျလညျး, က Barco နှင့်အတူပိုကောင်းမယ့်သိရကြလိမ့်မည်။
Barco တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနည်းပညာကုမ္ပဏီ, ဒီဇိုင်းများနှင့်ဖျော်ဖြေမှု, Enterprise နဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစျေးကွက်များအတွက်ကွန်ယက် visualization ထုတ်ကုန်ဖြစ်ပေါ်ပါသည်။ Barco 1934 အတွက် Lucien De Puydt အားဖြင့် Poperinge, ဘယ်လ်ဂျီယံအတွက်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုထံမှအစိတ်အပိုင်းများနှင့်အတူရေဒီယိုပရိသတ်အတွက်အထူးပြု။ အဆိုပါအမည်, "ဘယ်လ်ဂျီယံအမေရိကန်ရေဒီယိုကော်ပိုရေးရှင်း" သို့မဟုတ် BARCO ကုမ္ပဏီရဲ့အစောပိုင်းစကနေထိန်းသိမ်းထားသည်။ ယနေ့ Barco Sales & Marketing အဘို့ကိုယ်ပိုင်အဆောက်အဦးများ, ဖောက်သည်ပံ့ပိုးမှု, ဥရောပ, မြောက်အမေရိကနှင့်ပွေးအတွက် R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုရှိပါတယ်။ Barco (NYSE Euronext ဘရပ်ဆဲလ်: BAR) ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း 90 န်ထမ်းနှင့်အတူထက်ပို 3,250 နိုင်ငံများရှိတက်ကြွဖြစ်ပါတယ်။ Barco 1.051 အတွက် 2014 ဘီလီယံကိုယူရို၏ရောင်းအားတင်ခဲ့သည်။ မှာသူတို့ရဲ့တစ်ခုလုံးကိုထုတ်ကုန်လိုင်းထုတ်စစ်ဆေး: www.barco.com/en/.
4K 4K ဆုံးဖြတ်ချက် Barco ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ cross-ပလက်ဖောင်း GUI ကို E2 တင်ပြစနစ် အကွိမျမြားစှာစစ်ဆေးခြင်း Projector ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2015-04-30
နောက်တစ်ခု: Ikan - သင်နိုင်သလား!